1. Sida loo Dallaga Videos
1.1 Dalag on Windows
1.2 Dalag on Mac
1.4 Dalag Video Online
2. Dalag qaabab kala duwan
2.1 Dalag MP4 File
2.2 Dalag AVI File
2.3 Dalag wmv File
2.4 Dalag FLV File
2.5 Dalag MKV File
2.6 Dalag XVID File
3. kale Croppers Video
3.1 Dalag la iMovie
3.2 Dalag la Avidemux
3.3 Dalag la Pro Goo Final
4.1 Dalag iPhone Video
4.2 Dalag YouTube Video
Video Cropper: Sida loo Dallaga Videos in Full Screen
Waxaa shaki la'aan jiri doona waqtiyo aad u baahan tahay in aad noola videos. Tusaale ahaan, marka aad ka heshay qaar ka mid ah video files leh baararka madow on sare iyo ka hoose ama aad rabto in aad noola videos la dhinac oo waaweyn oo ku haboon shaashadda yar oo ah qalabka. Fadlan ogsoonow: software lagu taliyey in qodobkan waa u Windows, haddii aad u baahan tahay qaar ka mid ah tutorial ku saabsan sida loo noola videos on Mac, fadlan riix halkan .
In kastoo ugu software video tafatirka shaqada u qaban karaan, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) si weyn lagu talinayaa. Waa editor awood video aan kaliya noola aad video files, laakiin sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si kor loogu qaado video la saamaynta muuqaal ah, kala guurka, koob iyo ka badan. Marka aad dhamaysato video tafatirka, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa qaab ku habboon wax soo saarka si ay natiijada kama dambaysta ah iyada oo aan khasaaro tayada wax. Marka laga reebo in, waxa kale oo aad dhoofin karaan si ay fursado kale, tusaale ahaan share on YouTube ama si toos ah u shidin DVD video.
Easy in la isticmaalo Video Cropper: Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Si toos ah ama gacanta noola aad video galay size kala duwan.
Taageer tiro balaadhan oo ah qaabab video ay ka mid yihiin AVI, MOV, FLV, wmv, MKV iyo in ka badan.
Codso saamaynta, isticmaalka filtarrada, ku dar horyaal, music iyo logo sida aad jeceshahay.
Dhoofinta qaabab kala duwan, si toos ah Uploads online ama gubi cajalladaha.
1. Import video files si ay noola
Waxaad sidoo kale riixi kartaa "Import" on daaqadaha hoose dooro files ka your computer, ama kaliya si fudud u jiidi oo hoos u files si User ee Album ka hor iyaga oo intaa ku daray in waqtiga loo qabtay tafatirka.
2. Dalag videos
Hadda jiidi videos ka User ee Album in track video on Timeline ah iyo labo gool guji video ah. Waxaad ka heli doontaa ah "Dalag" badhanka dhexe ee shaashadda (ee soo socota si ay u soo celi button). Waxaa Riix si ay u helaan suuqa kala tafatirka in noola videos ah.
Sida aad arki karto, waxaa jira 3 fursadaha hoose: gacanta dooro meesha dalagga, meesha dalagga ee 16: 9 ama 4: 3 arrin radio. Ogsoonow in aad xulan raadiyaha dhinac baahisey markii dhoofinta haddii aad dooratay radio halkan. Haddii kale, bar madow lagu ahbaa doonaa. Tusaale ahaan, aad jaray aad video inay 16: 9, oo markaas aad u baahan tahay si ay u dejiyaan Resolution ee "goobaha Advanced" sida 480 * 272 ama 1280 720 *.
3. Dhoofinta jaray video
Marka natiijadu waa OK, guji "Abuur" si uu u badbaadiyo video ay yaryihiin. Waxaad dhoofin karo video in kasta oo qaabab loo jecel yahay ee computer deegaanka by doorashada "Qaabka". Haddii aad rabto in aad ka ciyaari video abuurka on iPod, iPhone, iPad, guji "Device" dooro thumbnail ee qalabka aad. Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa adiga video jaray si YouTube ama DVD gubi in cajalladaha u ciyaaro on TV isticmaalaya DVD ah Player.
Video abuurka Talooyin:
1. Mar walba waa fikrad fiican in aad ku eegaan video ka hor inta aadan u dhoofin si wadid aad u adag. Hubi video aan la jaray oo aad u badan.
2. Waxaad hubisaa in muuqa video jaray waa isku mid la mid ah qaabka wax soo saarka la doortay.
3. Ogow in tayada ay yaryihiin video waxay ku xiran tahay qaabka la doortay wax soo saarka ilaa xad. Tusaale ahaan, waxaad ka dooran cabbir yar, laakiin wax soo saarka sida dhinacyada badan oo video ah, oo tayo leh u lahaa wax wanaagsan uma noqon. Xaaladdan oo kale, dhinacyada wax soo saarka yar yihiin doorbiday.
Top 10 Christmas Gift Fikradaha Helaan Rag iyo Dumar
> Resource > Video > Top 10 Free Movies Christmas Online